Dagaalka Tigray-ga ee ka dhanka ah dowladda Itoobiya ma aha mid ku saabsan ismaamul. Waxay ku saabsan tahay Awoodda Dhaqaalaha - Diblomaasi
Ciidammada Itoobiya ayaa gudaha u galay gobolka Tigreega bishii Nofeember ee la soo dhaafay, kadib bilooyin ay socdeen xiisad u dhaxaysay xukuumadda Ra’isal Wasaare Abiy Ahmed iyo xisbiga haya talada Tigreegaa ee TPLF.
Kormeerayaasha iyo falanqeeyayaasha dibedda waxay u muuqdaan inay u arkaan sababta ugu dhow inay tahay khilaaf dhowaan dhex maray hoggaamiyeyaasha gobolka iyo dowladda federaalka oo uu hoggaaminayo ra’iisul-wasaaraha ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel-ka Abiy Axmed-oo ku saabsan dastuurnimada go’aankii baarlamaanka ee dib-u-dhigista qaranka iyo gobolka doorashada sababtuna tahay COVID-19.
Hoggaamiyayaasha gobolka Tigray ayaa qabtay doorasho ay ku diidan yihiin go’aankaas, kaas oo xisbiga talada haya ee Tigray People’s Liberation Front (TPLF) uu ku guulaystay dhammaan kuraastii, natiijadana waxaa markii dambe ku dhawaaqay baarlamaankii dalka.
Kuwo kale waxay tilmaamayaan kala duwanaanshaha fikirka ee u dhexeeya Abiy iyo TPLF inay tahay isha ugu weyn ee khilaafka. Doodahan, si kastaba ha ahaatee, ma sharxayaan sababta kala duwanaanshaha noocaas ahi uu u horseedi karo iska hor imaad millatari. Taasi waa sababta oo ah iyagu maahan sababaha hoose ee isku dhaca gabi ahaanba.
Dagaalkan ayaa ugu dambayntii ah dagaal loogu jiro xakamaynta dhaqaalaha Itoobiya, kheyraadkeeda dabiiciga ah, iyo balaayiin doollar oo dalku sannad walba ka helo deeq -bixiyeyaasha iyo deyn -bixiyayaasha caalamiga ah. Helitaanka hodantinimadaasi waa hawl ka timaadda cidda hoggaaminaysa dawladda federaalka-oo ay TPLF gacanta ku haysay ku dhawaad ​​soddon sano ka hor inta uusan Abiy xukunka la wareegin bishii Abriil 2018, ka dib mudaaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo xukuumadda uu hoggaaminaysay TPLF.
Xukunkii TPLF ee soddanka sano
TPLF waxay ahayd awoodda ugu weyn siyaasadda Itoobiya muddo ku dhow 30 sano, ka dib markii ay xukunka ka tuurtay xukuumaddii milatariga ahayd ee Mengistu Hailemariam sannadkii 1991-kii oo ay dagaal hubaysan oo daba-dheeraaday la gashay Jabhadda Xoreynta Dadka Eritrea, oo uu hoggaaminayay madaxweynaha hadda ee Eritrea, Isaias Afwerki. Markii ay dhacday dowladdii milateriga ahayd, Eritrea waxay ka go’day Itoobiya 1993-kii, hoggaamiyihii hore ee TPLF, ra’iisul wasaarihii geeriyooday ee Itoobiya Meles Zenawi, wuxuu dalka ku xukumay gacan bir ah ilaa uu ka dhintay 2012-kii.
Agaasimaha guud ee hadda ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa sidoo kale xubin ka ahaa hoggaanka TPLF wuxuuna soo noqday wasiirka caafimaadka Itoobiya sanado badan intii uu Meles hayay. Ka hor inta uusan Abiy xukunka qabsan, dhammaan madaxdii sirdoonka ee dalka iyo taliyayaashii militariga waxay ka yimaadeen TPLF ama waxay ka tirsanaayeen garabka milateriga ee xisbiga intii lagu jiray halgankii hubaysnaa ee lagula jiray Mengitsu. Markii ay xukunka qabsatay, xukuumadda uu hoggaamiyo TPLF waxay ciidamadeeda u beddeshay ciidan loo malaynayo inay Itoobiyaan yihiin, kadib markii ay gabi ahaanba kala direen ciidankii hore ee Itoobiya. Tani waxay hubisay in inta badan jeneraallada ugu sarreeya iyo hoggaamiyeyaasha kale ee ciidanka ee ciidanka cusub ay sidoo kale ka yimaadeen darajooyinka TPLF.
Awoodda siyaasadeed iyo militariga ee TPLF ayaa ugu dambayntii dhalisay awood dhaqaale maadaama ay awood u siisay hoggaamiyayaasheeda in ay si buuxda u maamulaan dhaqaalaha dalka iyo kheyraadka dabiiciga ah – gaar ahaan dhulalkooda iyo waliba socodsiinta gargaarka iyo amaahda. Sanadihii la soo dhaafay, Itoobiya waxay heshay celcelis ahaan qiyaastii $ 3.5 bilyan oo gargaar dibadeed oo keliya, taas oo lagu qiyaasay kala bar miisaaniyadda qaranka ee sannadihii dambe ee Meles.
Xukuumadda ay hoggaaminaysay TPLF ayaa sidoo kale deyn aad u badan ka qaadatay dayn-bixiyeyaal iyo dawlado, gaar ahaan Shiinaha, oo gaadhay 60 boqolkiiba GDP-ga dalka markii Abiy uu xukunka qabtay. Dhab ahaantii, maamulka cusub ee Abiy, oo dhaxlay kaydka sarifka lacagaha qalaad, wuxuu la halgamayay u-adeegidda deyntaan waxaana lagu qasbay inuu codsado dib-u-dhigis iyo dib -u -heshiisiin ku saabsan shuruudaha amaahdaas oo laga helo deyn-bixiyayaasha.
Intaas waxaa sii dheer, dastuurkii ay xukuumaddii ay hoggaaminaysay TPLF soo saartay 1994-kii, kaas oo u oggolaaday kaliya lahaanshaha guud ee dhulka, ayaa saraakiisha dowladda si aan kala go ’lahayn u heli kara kheyraad dhul badan oo ku yaal koonfurta dalka, gaar ahaan gobollada Benishangul-Gumuz iyo Gambela, oo ay u kiraystay maal-gashadeyaal shisheeye iyo kuwa gudaha ah oo kiraystay muddo-dheer, oo urursaday balaayiin doolar intii hawshaas socotay. Sida laga soo xigtay Human Rights Watch, bishii Janaayo 2011 dawladda Itoobiya waxay ka kiraysay maalgashadayaal shisheeye 3.6 milyan oo hektar oo dhul ah, una dhiganta baaxadda Nederland.
Intaa waxaa dheer, TPLF waxay sidoo kale awoodday inay maamusho dhammaan waaxyaha dhaqaalaha Itoobiya iyada oo u sii marisay shirkado hoos yimaadda ururkeeda weyn, Sanduuqa Dhaqaalaha ee Dib-u-dhiska Tigray (EFFORT), illaa iyo hadda waa urur-weynaha ugu weyn dalka. Illaa dhowaan, EFFORT waxaa maamulayey dadkii uu u carbiyey Meles, Azeb Mesfin, iyo saraakiisha TPLF ayaa weli xubno ka ah shirkadaha waaweyn ee hoos yimaadda ururkan, kuwaas oo ku raaxeystay helitaanka amaahda qayb maaliyadeed oo ay maamusho Bangiga Ganacsiga ee Itoobiya. Bangiga Horumarinta Itoobiya.
Awoodda TPLF kuma koobnayn dhaqaalaha oo kali; waxa kale oo ay si toos ah u faragelisay xulashada hoggaamiyeyaasha diimaha waaweyn, taas oo ay u aragtay inay tahay aaladda xakamaynta bulshada. Intii ay TPLF xukunka haysay, labada awoowe ee Kaniisadda Orthodox ee Itoobiya, oo ay ku lahaayeen in ka badan 40 milyan oo raacsan waddanka, waxay asal ahaan kasoo jeedaan qoomiyadda Tigray. Hoggaamiyayaasheedu waxay sidoo kale soo farageliyeen xulashada Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka ee Itoobiya, kaasoo aakhirkii iska caabin kala kulmay qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo hoggaamiyeyaasha, kuwaas oo ay dawladdu xirtay, taasoo horseeday mudaaharaadyo ballaaran oo ay muslimiintu ka sameeyeen guud ahaan dalka sannadkii 2012-kii.
Waxaa maalgeliyay kaabayaasha dhaqaalaha iyo qaybaha waxbarashada iyo caafimaadka, oo inta badan lagu maalgeliyay kaalmo iyo deymo shisheeye, xukuumaddii ay hoggaaminaysay TPLF, oo uu hoggaaminayey Meles, ayaa kormeeray horumarka dhaqaale ee dalka ka socda ku dhawaad ​​soddonkii sano ee ay awoodda haysatay. Talisku sidoo kale wuxuu ahaa mid kaligiis taliye ah, oo inta badan xabsi ku rida siyaasiyiinta mucaaradka iyo suxufiyiinta wuxuuna si xor ah u adeegsan jiray difaaca iyo ciidamada amniga si uu u xakameeyo mudaaharaadyada ka dhanka ah dowladda.
Kooxda xuquuqda aadanaha sida Amnesty International iyo sidoo kale Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka ayaa marar badan ku eedeysay ciidamada ammaanka dowladda xadgudubyo aad u daran, oo ay ka mid yihiin jirdil, ka dhan ah xubnaha xisbiyada mucaaradka iyo shaqsiyaadka lagu tuhunsan yahay inay la shaqeeyaan kooxo dagaal hubeysan kula jira dowladda, sida Jabhadda Xoreynta Oromada, Jabhadda Xoreynta Ogaadeenya, iyo Ginbot 7 oo ka mid ah xisbiyada waaweyn ee ka jira dalka oo ka soo horjeeda nidaamka federaalnimada qowmiyadeed.
In kasta oo Mareykanka iyo Midowga Yurub ay ogyihiin in dowladda Itoobiya ay ku liidata xagga xuquuqda aadanaha, haddana horumarka dhaqaale ee ay arkeen iyo doorka muhiimka ah ee Itoobiya ay ku leedahay la-dagaallanka maleeshiyada Al-Shabab ee ka hawlgala Soomaaliya waxay la macno tahay inay ka caga jiidayaan inay caddaadis ku filan saaraan dowladda ay TPLF hoggaamiso si ay u sameeyaan dib-u-habayn dimuqraadiyadeed, xataa markii ciidammada ammaanka ee dawladdu ay Addis Ababa ku toogteen boqollaal qof oo mudaaharaadayaal ah, kuwaas oo ka mudaaharaadayay natiijadii doorashada ee ay dawladdu sheegtay inay guulaysatay. Waxay dhinaca kale eegeen mar kale markii ay xukuumaddu sheegtay inay ku guulaysatay dhammaan kuraastii baarlamaanka intii lagu jiray doorashadii guud ee u dambaysay ee 2015, taas oo xisbiyada mucaaradku ku andacoonayeen in lagu shubtay.
Waa maxay Awoodda ay TPLF doonayso inay la dagaallanto si ay u ilaaliso?
Waa iska cadahay sanado badan in xukunka siyaasadeed ee TPLF uusan socon karin muddo aan la cayimin. Waa iska cadahay sanado badan in xukunka siyaasadeed ee TPLF uusan sii socon karin. Mudaaharaadyo baahsan ayaa ka billowday 2018 gobollada Oromiya iyo Amxaarada, oo ah deggaanada labada qowmiyadood ee ugu tirada badan dalkaas, taasoo ku khasabtay isbahaysiga ay hormuudka ka tahay TPLF, Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front, inuu beddelo ra’iisul wasaarihii xilligaas Hailemariam Desalegn, oo beddelay Meles ka dib geeridiisii ​​kediska ahayd ee 2012. (Inkasta oo Hailemariam uu ka soo jeeday qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Koonfurta, haddana khatar weyn kuma uusan keenin awoodda TPLF ee gudaha Itoobiya.)
Tani waa markii hoggaamiyeyaasha labada xisbi ee isbahaysiga ay hormuudka u tahay TPLF, Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiga Qaranka Amxaarada iyo Ururka Dimuqraadiga Shacabka Oromada, oo ilaa hadda u ciyaarayay kooxda TPLF, ay si qarsoodi ah u go’aansadeen inay xooggooda isugu geeyaan oo jabiyaan haybadda TPLF iyagoo u codeeyay Abiy Axmed maadaama uu yahay hoggaamiyaha isbahaysiga, tallaabo aysan hoggaanka TPLF u arkin inay timaaddo oo aysan waligeed filanaynin ama aysan cafinaynin.
Tan iyo markii uu xukunka qabtay 2018, maamulka cusub ee federaalka ee Abiy Axmed wuxuu si toos ah ugu hanjabay awoodda dhaqaale ee muddada dheer soo jirtay ee TPLF guud ahaan Itoobiya isagoo doonaya inuu xaddido saamayntooda gobolka yar ee Tigray.
Abiy Axmed ayaa daaha ka rogay ama fuliyay tallaabooyin dhaqaale oo muhiim ah oo halis ku ah awoodda dhaqaale ee madaxda TPLF. Kuwaas waxaa ka mid ah qorshihii maamulkiisa ee ah in uu si gaar ah uga dhigo shirkadda ay dowladdu leedahay ee Ethio Telecom, Shirkadda Sonkorta ee Itoobiya, iyo shirkadaha ku jira qaybta tamarta oo leh hanti ka badan 7 bilyan oo doollar.
Dhawaanahan, dawladdu waxay soo bandhigtay lacago cusub, kuwaas oo sida uu sheegay ra’iisul wasaaruhu loogu talagalay in lagula dagaallamo musuqmaasuqa iyo tahriibka; qaar ka mid ah goobjoogayaasha ayaa xusey in tan ugu weyn loola dan lahaa in lagu xakameeyo lacagta ka baxsan nidaamka maaliyadeed ee ay haystaan ​​saraakiishii dowladdii hore iyo hay’adihii dhaqaalaha ee ay maamulku tuhunsan yihiin inay ku hawlan yihiin ganacsi sharci darro ah iyo hawlo sharci darro ah.
Bishii Nofeembar 17, xeer-ilaaliyaha guud ee federaalku wuxuu ku dhawaaqay in dawladdu xanibtay akoonnada bangiga ee 34 ka mid ah shirkadahaas si loogu maal-geliyo “weerarada ku salaysan qowmiyadaha iyo hawlaha argagixisada, xiriirinta iyo kaalmada dhaqaale ee TPLF, ka-fogaanshaha canshuuraha iyo musuqmaasuqa.”
Dib-u-habaynta Abiy ayaa sidoo kale hoos u dhigtay saamayntii TPLF ee laamaha amniga. Isla markii uu xukunka la wareegay, Abiy wuxuu sii daayay kumanaan maxaabiis siyaasadeed iyo weriyeyaal ah oo ay dawladdu xirtay, kooxo aan la mamnuucin oo wada dagaallo hubaysan oo ka dhan ah dawladda Itoobiya, wuxuuna heshiis nabadeed la saxiixday Ereteriya, kaas oo ay dawladda uu hoggaamiyo TPLF la gashay dagaal xuduud ah galaaftayna nolosha tobbanaan kun oo askari oo labada dhinac ah.
Kadibna wuxuu shaqada ka eryay taliyihii amniga ee aadka loogu cabsan jiray, Getachew Assefa, wuxuuna badalay taliyihii militariga. Wuxuu durbadiiba bilaabay in uu dib u habeyn ku sameeyo qaybaha milateriga iyo amniga oo looga golleeyahay in la keeno matalaad dheellitiran oo qowmiyadaha ah. Tani waxay si cad ugu sheegaysaa hogaamiyaasha TPLF in Abiy uu halis weyn ku yahay awooddooda mudada dheer ee ciidamada qalabka sida iyo dhaqaalaha Itoobiya oo waxay u dhaqmeen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen.
23-kii Juun, 2018, ku dhawaad ​​saddex bilood markii Abiy Axmed uu xukunka qabtay, waxaa jiray isku day dil oo isaga ka dhan ah intii uu socday isu soo bax ka dhacay Addis Ababa. Xukuumada ayaa waxyar kadib u aqoonsatay madaxii hore ee amniga TPLF, Getachew, inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay, laakiin wuxuu u baxsaday gobolka Tigray. Maxkamad federaal ah ayaa soo saartay waaran qabasho ah oo la xiriira isku dayga iyo xadgudubyada kale ee xuquuqda aadanaha, laakiin dowlad deegaanka Tigreega ayaa diiday in lagu wareejiyo. Ku-xigeenkiisii ​​hore, ayaa la xiray isagoo ka cararaya ciidamada ammaanka.
Tan iyo markii ay TPLF lumisay awooddii dawladda dhexe, waxaa si aad ah u soo noqnoqday colaadaha ku salaysan qowmiyadaha dhammaan gobollada, marka laga reebo Tigreega. Dawladaha, marka laga reebo Tigreega, ayaa si weyn u kobcay. In kasta oo uu dalka ka jiro loolan qowmiyadeed oo qoto dheer, haddana ma sharraxayo sida malaayiin ay u barokaceen; sida boqolaal Masiixiyiinta Orthodox ah iyo qowmiyadda Amxaarada ee ku nool Koonfurta loo xasuuqay loona gubay guryahoodii, kaniisadihii, iyo meheradihii; sida ardayda qawmiyadda Amxaarada loo afduubtay; ama sida ay muhiimka u yihiin tirooyinkii Oromada sida fannaankii Hachalu Hundessa, taasoo dhalisay mudaaharaadyo sababay dhimashada in ka badan 150 qof oo rayid ah.
Weeraradan badankoodu waxay u muuqdaan kuwo la soo abaabulay oo lagu maalgeliyey kuwii ka lumay koritaanka Abiy ee awoodda iyo dib-u-habayntii uu samaynayey; waxay ka go’an tahay inay dalka ka dhigaan mid gebi ahaanba aan dawlad ahayn haddii aanay iyagu ahayn kuwa xukuma. Waxaa jira is-afgarad aad u weyn oo ah in hoggaamiyeyaasha TPLF ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee ka soo horjeeday dib-u-habayntii Abiy iyagoo waliba leh awood ay ku qorsheeyaan kuna fuliyaan weerarrada noocaas ah – iyagoo adeegsanaya muruqa maaliyadeed iyo shabakadda amniga ee ay dhiseen muddo soddon sano ah oo xukun siyaasadeedka ah.
Waxaa iska cad in khilaafka hadda jira uusan ku ekaan cidda maamuli doonta Tigray maxaa yeelay dib-u-dhigista doorashooyinka heer qaran iyo heer gobolba waxay kordhisay muddadii laamaha sharci-dejinta iyo fulinta ee dhammaan dowlad-goboleedyada dalka, oo ay ku jirto Tigray-ga, oo ay weli ka taliyaan TPLF. Mana aha iska hor imaad u dhexeeya federaaliisteyaasha iyo hal-raacyada; Nidaamka federaaliga ah ee Itoobiya ayaa weli ah mid taagan, waxaana taas daliil u ah dowlad-goboleedkii 10-aad oo dhawaan la sameeyay.
Taas beddelkeeda, waxa xudunta u ah iskahorimaadka socda waa dib-u-habaynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee Abiy Axmed iyo xawaaraha aan kala joogsiga lahayn ee lagu soo bandhigay – tallaabooyinka ay hoggaamiyeyaasha TPLF u arkaan inay yihiin kuwo aan la aqbali karin oo khatar ku ah awoodda dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay muddada dheer ku raaxaysanayeen iyo saamaynta weyn ee ay weli leeyihiin oo ku baahsan Itoobiya oo dhan.
Awooddaasi waa wax ay TPLF doonayso inay la dagaallanto si ay u ilaaliso, taasna waxaa daliil u ah go’aanka lagu fulinayo waxa sarkaal sare oo ka tirsan TPLF ku tilmaamay “shaqo joojin horudhac ah” oo ka dhan ah Taliska Woqooyiga ee ciidanka federaalka, taasoo dhalisay khilaafka hadda jira. Khatarta hadda jirta ayaa ah in tallaabooyinka joogtada ah ee TPLF ee sii kordhaya ee geesinimada leh ay ka dhigi karaan isbeddellada nabdoon ee Abiy mid aan macquul ahayn oo markaa ka dhigaya kala-guur rabshadeed lama huraan.
Related Topics:'Itoobiya iyo TPLF waxay cunaqabateynta uga badbaadi karaan heshiis' - ayay tiri dowladda MareykankaFeatured
Aljeeriya ma waxay rabtaa inay qaado tillaabooyin kale oo ka dhan ah Morookko?